"City Center" (Surgut): zomphakathi ka Khanty-Mansiysk Autonomous avtonomnyy
"City Center" (Surgut) - kuyinto ebalulekile emphakathini eziyinkimbinkimbi, ngokuhlanganisa yezitolo endaweni, izindawo zokudla, amahhotela, yamabhayisikobho kanye ibhizinisi Amahhovisi. "City ngaphakathi idolobha" - kangaka okuthiwa le phrojekthi ihlinzeka izakhamuzi nezivakashi ezihlukahlukene amasevisi Surgut.
Uxhumano Centre sici
Over izindawo ezinkulu, akha 25,000 m², kukhona zonke izinhlobo izindawo. Isakhiwo ihlukaniswe yaba izingxenye eziningana. Engxenyeni ibhizinisi kulo bangabantu ezihlukahlukene Amahhovisi. ngomunye wabokuqala egumbini inkomfa zanamuhla for a izivakashi ezingamakhulu enikeziwe wokuxoxisana elite ibhizinisi.
Izivakashi inikelwa ehhotela ukhululekile ukuthi has 4 izinkanyezi. At onawo izivakashi '80 amakamelo lwezigaba ezahlukene. Ukuze ngikhululeke ngokugcwele futhi uthole ngokuvumelana, has a isikhungo engcono, okuyinto uqhosha i okugeza eyiqiniso Japanese. "Mir" cinema zonke novelties we cinema emhlabeni futhi opopayi zezingane ethandwa ziboniswa esibukweni esikhulu.
"City Center" (Surgut) uhlongoza ukuhlola boutiques lemikhiqizo abadumile lonke elaseRussia nakwamanye amazwe. Futhi emva yezitolo Chic bangase ahlale etafuleni yokudlela "koLwesihlanu Seven", esemgwaqweni esitezi sesithathu of the complex.
Film Center "Mir"
Ukuze ubone yonke izindaba cinema Russian angaphandle, bendawo nezivakashi kumelwe uvakashele "City Center" (Surgut). Cinema "Mir", esisogwini insimu yalo, ithandwa kakhulu. It has amahholo amabili. Basuke ifakwe elithambile, izihlalo ukhululekile futhi enamandla air-conditioning nokushaya komoya. Ihholo lokuqala angazamukela 103 izibukeli, kwesibili - ku 189.
Ngenxa imishini yesimanje, okuyinto ifakwe Multiplex, wonke umuntu angakwazi ukubuka ama-movie ku-3D-format.
Ngaphambi kweseshini noma ngemva umbono ezimnandi umema ukubheka futhi ukunambitha izitsha yasekuqaleni Café "City". Lapho ungakwazi lizwakale yonke nalokho athokoza ngakho abaningi cuisine ajwayelekile European. Abaningi surely ukujabulela "Chao-Cocoa", esitolo ikhofi, lapho izitsha bendabuko Japanese kufakwe imenyu.
Ukuze kube lula izivakashi enikeziwe ukuthi kungenzeka ukuba ukubhuka amathikithi sessions inthanethi at "Movie Iphosta". Kunezindlela ezihlukahlukene, phakathi lapho ungakhetha eyamukelekayo kakhulu ukukhokha.
Ihhotela Business Class
Ukuze ihlanganise izivakashi oza Khanty-Mansiysk esifundeni, indawo bekhululeke kakhudlwana ukuze uthole ngaphandle "City Center" e Surgut. Ihhotela ikhona insimu yalo kungokwalabo esigabeni ibhizinisi ekilasini, futhi isekela image-hotel ezine.
Amakamelo zihlukaniswe zibe:
standard (olulodwa futhi double);
Kungakhathaliseki isigaba ikamelo, isivakashi ngasinye kuyoba kahle ihlanganise yokuzilibazisa nje kuphela kodwa futhi izici ibhizinisi. Ngenxa yalesi imisebenzi stylish, ngocingo, ephephile, tableware kunesidingo. Ngenxa ukuncoma, isivakashi ngasinye uthola ibhodlela nsuku lamanzi esiphethu okumsulwa.
Ukuze izivakashi indvudvuto ephelele futhi ukungacabangi ngezinkinga isinqumo nasuschih, izisebenzi uhlale ukulungele ukunikeza noma yiluphi usizo. "City Center" (Surgut) has konke okudingayo, ukuze iklayenti wakwazi ukuthola uhla ehhotela amasevisi eyengeziwe, kusukela ubuhle salon kanye ukuvakashelwa yekhasino.
"KoLwesihlanu Seven" e Surgut
Esitezi nesithupha Surgut "City Center" edolobheni yokuzijabulisa futhi ngisebenza. Lapha, ubala nje kuphela zonke nemikhiqizo yomhlaba jikelele we izingubo nezicathulo, kodwa sisalokhu yokudlela lemukelekako nge igama ezithakazelisayo "koLwesihlanu Eziyisikhombisa."
Kutholwe azungezwe lamakamelo isivakashi makhulu namawindi elikhanyayo ukunikeza nomuzwa omkhulu sintanta emoyeni. romantic Ikakhulukazi lapha kwenzeka ebumnyameni. Izibani komuzi ngokoqobo zikhange, futhi amadoda amaningi Surgut (hhayi kuphela) is lapha wenza isicelo somshado.
Cuisine European obusa imenyu. Kodwa labapheki ukunikela izitsha ezindala zokupheka Russian. Ozazisa ngokukhethekile abathandi ukudla okunjalo Friend futhi udle, ngoba izingxenye akuzona ezincane.
Ngaphansi ingilazi isiphuzo emihle evela iphutha amakhadi olubanzi ungakwazi ukujabulela umculo ukukhanya, okungadingi ukuvimbela ukuxhumana. Futhi abantu abacabangi umzuzu ngaphandle ukuxazulula izinkinga ebhizinisini, inqobo-Wi-Fi.
"City Center" (Surgut) inikeza amazwibela yokudlela ngezikhathi zokusebenza zebhizinisi. Kubantu matasa lapha ukulungiselela eqotho futhi zihlukahlukene zikuyise ibhizinisi.
Ikheli "City Center" (Surgut) kulula ukufinyelela ngemoto, ezokuthutha umphakathi nokuhamba. Itholakala kwi Lenin Prospekt, 43. I eziyinkimbinkimbi ezibonakala esekude, hhayi kuphela ngenxa look zanamuhla yayo sibukeka kahle kodwa futhi imitha ezine-iwashi ogibele Dome main, esibheke avenue. Yakhelwe indlela Swiss eqinisekisa isikhathi esiqondile ne satellite, ngakho elite ibhizinisi kungaxhunywana ngokucacile ukuchaza imigomo izingxoxo.
Malaya Aziya (Anatolia)
Zhuan Le Izikhonkwane (France): incazelo, abahambi Izibuyekezo
Izimfihlakalo Pyramids: mbono othandwayo
Lake Pyaozero: incazelo kanye nezithombe
Izindiza zezindiza zase-Ukraine: izici eziyinhloko
Ingubo Pink: romantic futhi bubuhle
Indlela thunga aiguillette kwesokudla?
Accounting inhlangano impahla inhlangano (umbiko)
Biography kaJakobe Gandolfini kuphelile
Indlela ukuqeda le sheen oily ebusweni: amathiphu namasu
Okusele esiswini? Izimbangela ubuhlungu